နေဒွေးရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကောန့်ဝင်မပေး ဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် ထောက်ပြဝေ ဖန်တဲ့ပရိသတ်ကိုအကျိုးသင့်အကြော င်းသင့်ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဆောင်း ယွန်းစံ – XB Media Myanmar
နေဒွေးရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကောန့်ဝင်မပေး ဘူးဆိုတဲ့ စကားအပေါ် ထောက်ပြဝေ ဖန်တဲ့ပရိသတ်ကိုအကျိုးသင့်အကြော င်းသင့်ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဆောင်း ယွန်းစံ
October 23, 2020 Bestie_Author
သရုပ်ဆောင် ဆောင်းယွန်းစံကတော့ လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းခံနေရသူ တ စ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းယွန်းစံက သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း သရုပ်ဆောင် နေဒွေးနဲ့ သံ စဉ် မောင်တို့ရဲ့ ကိစ္စမှာ မဆီမဆိုင် အပြောခံနေရပြီး အထင်အမြင်လွဲခံနေရတာကြောင့် သူမ ဘ က်က မှန်ကန်ကင်းရှင်းကြောင်း ပရိသတ်တွေကို ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ သော ပရိသတ်တွေကတော့ သူမအပေါ် ဝေဖန်မှုတွေရှိနေသေးပြီး ဒီကနေ့မှာလည်း နေဒွေးရဲ့ ပို့စ်တွေမှာ ကောန့်ဝင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီးဆောင်းယွန်းစံက“ဒိကိစ္စလေးတော့ ဝင်ရှင်းသင့်တယ်ထင်လို့နော်။ ဆော င်း like မပေး cmt မပေးဘူးဆိုတာ ကိုနေဒွေးနဲ့သံစဉ်မောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ပိုစ်တွေကို ပြောတာ ပါ။ ဈေးရောင်းပိုစ့်တွေ တခြားမသက်ဆိုင်တဲ့ ပိုစ်တွေမန့်ချင်မန့်မယ် စကားပြောမယ်။ ဒါဆောင်းရဲ့ personal လေ။ ညီမတို့ရော ညီမတို့သူငယ်ချင်းတွေဈေးရောင်းရင် ဝင်မဝယ်ဘူးလား.? ဒါနော က်ဆုံးရှင်းတာ။ ကျန်တာ ထင်ချင်တာထင်တော့ .. ဟုတ်ပြီနော် ✌️” ဆိုပြီး အကျိုးသင့်အ ကြော င်း သင့် ပြန် လည်ဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းယွန်းစံကတော့ ဖြစ်လာသမျှကို ပြောခံရမယ့်ကံပါလို့ ပြောခံရတယ်လို့ သက်မှတ်ကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောခဲ့ပြီးပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ Cele Connections ပ ရိ သတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
ေနေဒြးရဲ႕ ပို႔စ္ေတြမွာ ေကာန႔္ဝင္မေပးဘူးဆိုတဲ့ စကားအေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္တဲ့ ပရိသတ္ကို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့တဲ့ ေဆာင္းယြန္းစံ
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဆာင္းယြန္းစံကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အာ႐ုံစို က္ျ ခ င္းခံေနရသူ တ စ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာင္းယြန္းစံက သူမရဲ႕ သူ ငယ္ခ်င္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနေဒြးနဲ႔ သံ စဥ္ ေမာင္တို႔ရဲ႕ ကိစၥမွာ မဆီမဆိုင္ အေျပာ ခံေနရၿပီး အထင္အျမင္လြဲခံေနရတာေၾကာင့္ သူမ ဘ က္က မွန္ကန္ကင္း ရွင္းေၾကာင္း ပရိသတ္ေတြကို ရွင္းျပခဲ့ၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ ေသာ ပရိသ တ္ေတြကေတာ့ သူမအေပၚ ေဝဖန္မႈေတြရွိေနေသးၿပီး ဒီကေန႔မွာလည္း ေနေ ဒြးရဲ႕ ပို႔စ္ေတြမွာ ေကာန႔္ဝင္မေပးဘူးဆိုတဲ့ စကားကို ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့တာပဲ ျဖ စ္ ပါတယ္။
ထိုကိစၥနဲ႔ ပက္သတ္ၿပီးေဆာင္းယြန္းစံက“ဒိကိစၥေလးေတာ့ ဝင္ရွင္းသင့္တယ္ထင္ လို႔ေနာ္။ ေဆာ င္း like မေပး cmt မေပးဘူးဆိုတာ ကိုေနေဒြးနဲ႔သံစဥ္ေမာင္နဲ ႔ဆို င္တဲ့ ပိုစ္ေတြကို ေျပာတာ ပါ။ ေဈးေရာင္းပိုစ့္ေတြ တျခားမသက္ဆိုင္တဲ့ ပိုစ္ေတြမ န ႔္ခ်င္မန႔္မယ္ စကားေျပာမယ္။ ဒါေဆာင္းရဲ႕ personal ေလ။ ညီမတို႔ေရာ ညီမတို ႔သူငယ္ခ်င္းေတြေဈးေရာင္းရင္ ဝင္မဝယ္ဘူးလား.? ဒါေနာ က္ဆုံးရွင္းတာ။ က်န္တာ ထင္ခ် င္တာထင္ေတာ့ .. ဟုတ္ၿပီေနာ္ ✌️” ဆိုၿပီး အက်ိဳးသင့္အ ေၾကာ င္း သင့္ ျပန္ လည္ေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။
ေဆာင္းယြန္းစံကေတာ့ ျဖစ္လာသမွ်ကို ေျပာခံရမယ့္ကံပါလို႔ ေျပာခံရတယ္လို႔ သ က္မွတ္ေၾကာင္း သူမရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ Cele Connections ပ ရိ သတ္ႀကီးအားလုံးလည္း သာယာေပ်ာ္႐ႊ င္တဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေပးလိုက္ပါတယ္။
ယောကျာ်းချင်းဆိုပြီး လာဖက်တာ ကျွန်တော်လက်ခံဘူး၊ ကြိုက်လည်းမ ကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ပိုင်စိုးစံ
ဆင်းရဲချို့တဲ့လွန်းတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံကာ မိုးလင်းမိုး ချုပ်လှူဒါန်းနေတဲ့ ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ အ လှူ ဗီဒီယို
ကိုဗစ်ကာလမှာ ခက်ခဲနေတဲ့ ကျူး ကျော်မှာနေထိုင်သူ ဘိုးဘွား(၁၅၀) အတွက် ငွေကျပ် (၁၀) သိန်းလှူဒါန်း ခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်နဲ့အောင်သူ တို့ဇနီး မောင်နှံ November 29, 2020
မိဘအပေါ်သိတတ်တဲ့ သားငယ်လေး က သူ့အတွက်အားပါဆိုတဲ့နေမျိုး အောင် November 29, 2020
မျက်လုံးကတဆင့်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရ တဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ဇာတ်ပို့သ ရုပ်ဆောင်နေလင်း November 28, 2020
သားအဖနှစ်ယောက်ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို လွမ်းနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Cover Song လေးတစ်ပုဒ်ကို တင် ဆက်ပေးလာတဲ့ ဂရေဟမ်နဲ့ ပန်း ရောင် ခြယ် November 28, 2020
အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံက ထိုင်းမလေး တွေကိုကြည့်ပြီး အားကျစိတ်တွေ ဖြစ် နေကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာပြောလာတဲ့ နေခြည်ဦး November 28, 2020
ချို့တဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့ကလေးတွေကို တွေ့တိုင်း ငယ်ငယ်က မပြည့်စုံခဲ့တဲ့ ဘဝလေးကို ပြန်မြင်ယောင် မိတာ ကြောင့် သူစိမ်းတွေလို မခံစားရဘူး ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး November 28, 2020